पढ्न किन मन गर्दैनन् विद्यार्थी ?- फिचर - कान्तिपुर समाचार
पढ्न किन मन गर्दैनन् विद्यार्थी ?
मंसिर १५, २०७४ जितेन्द्र साह
विराटनगर — दुई/चार दिन होइन, एक महिनासम्म छोरो विद्यालय नगएको थाहा पाएपछि विराटनगर–८, संगमचोककी ३५ वर्षीया सरस्वती धोबी छक्क परिन् । उनका छोरा विष्णु स्थानीय सरकारी विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्छन् ।
दुई/चार दिन होइन, एक महिनासम्म छोरो विद्यालय नगएको थाहा पाएपछि विराटनगर–८, संगमचोककी ३५ वर्षीया सरस्वती धोबी छक्क परिन् । उनका छोरा विष्णुस्थानीय सरकारी विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्छन् ।
विद्यालय जान्छु भनेर बिहान झोलासहित निस्कने उनी अन्यत्र खेलेर समय कटाउँदा रहेछन् । साँझ मात्र घर फर्कने हुनाले परिवारजनले कहिल्यै शंका गरेनन् । विष्णुकै स्कुले साथीहरूले भनेपछि उनी निराश भइन् ।
सरस्वतीका श्रीमान्को दुई वर्षअघि निधन भइसकेको छ । घरेलु कामदार, दुई सन्तानकी आमा उनले गरिबीले गर्दा जेठो छोरालाई पढाउन सकिनन् । जेठो छोरा र उनले आफ्नै पौरखले कान्छोलाई धेरै पढाउने धोको लिएका छन् । बरालिएको थाहा पाएर धेरै सम्झाइबुझाइ गरे पनि उनी पढ्न जान मानेनन् । छोराको भविष्यको चिन्ताले पिरोलिएकी उनी ढिलो नगरी विद्यालय पुगिन् र प्राचार्यसँग सम्झाइबुझाइ गरिदिन अनुरोध गरिन् । प्राचार्य परामर्शदातासहित विष्णुलाई भेट्न घरै पुगे ।
‘केही साथीले कागतको डल्लो बनाएर छात्रालाई हिर्काउँछन्, कसले फाल्यो भनेर सोधेपछि मतिर देखाइदिन्छन्, अनि सधैं मैले गाली र कुटाइ खानुपर्छ,’ विष्णुले भने, ‘धेरै पटक कक्षा शिक्षकलाई भन्दा पनि सुन्नुभएन ।’ त्यसैले आफूलाई विद्यालय जान मन नलागेको उनले बताए ।
कक्षाभित्रको माहोलले गर्दा विष्णुलाई पढाइप्रति अरुचि भएको प्रस्टियो । अबदेखि कसैले दु:ख नदिने विश्वास दिलाउँदै प्राचार्यले उनलाई विद्यालय बोलाए । त्यो अघि नै उनले शिक्षक एवं विद्यार्थीसँग छलफल गरिसकेका हुनाले विष्णुलाई फेरि कक्षाकोठामा कुनै समस्या भएन । उनी अहिले आनन्दले विद्यालय गइरहेका छन् ।
‘प्राचार्य एवं शिक्षकको सहयोगले गर्दा बाबु मन लगाएर पढ्न थालेकोले म धेरै खुसी छु,’ सरस्वतीले सुनाइन्, ‘आखिर जेठो छोरो र म उसकै पढाइको लागि अर्काका लुगा धोएर र भाँडा माझेर एक–एक पैसा जोडिरहेका छौं ।’
यस्तै, अर्को घटनामा शिशु कक्षामा पढ्ने मोरङको कटहरी गाउँपालिकाकी स्वस्तिका शर्मा सन्चो नभएर धेरै दिनसम्म विद्यालय जान पाइनन् । पहिलो दिन विद्यालय जाँदा र प्रार्थना गर्ने बेला उनी रोइरहिन् । माया गरेर सोध्दा उनले भनेको सुनेर शिक्षकहरू मुस्कुराए । धेरै दिनपछि विद्यालय आएको हुनाले मिसले पिट्ने हुन् कि भनेर उनी डराइरहेकी थिइन् । गुरुआमाले ‘छोरीसँग आज धेरै खेल्ने र रमाइलो गर्ने’ भनेपछि उनी तुरुन्तै हाँस्न थालिन् ।
पाँच कक्षा पढ्ने मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाका आदित्य सहनी विद्यालय जाने बेलामा भोजन खाएपछि जहिल्यै बान्ता गर्थे । छोरालाई सन्चो भएन भन्दै चिकित्सकोमा लग्दा कुनै रोग फेला परेन । मनोचिकित्सककोमा लानुपर्‍यो । यस्तो हुने कारण झनै रोचक थियो । सानैदेखि फास्टफुड खाने बानी परेको उनलाई दाल, भात र तरकारी नरुचेर त्यस्तो भएको रहेछ । अभिभावक एवं चिकित्सकको प्रयासपछि बल्ल उनमा सामान्य भोजन खाने बानी बसेर समस्या समाधान भयो ।
घर, विद्यालय एवं वरिपरिको वातावरणमा गडबडी, मनोवैज्ञानिक डर र आलस्यताले गर्दा विद्यालय जान नचाहने तथा पढ्न मन नगर्ने प्रवृति देखिएको विराटनगरका प्राध्यापक एवं मनोपरामर्शदाता दुर्गा चुडालले बताए । ‘यथार्थ नबुझी बालबालिकालाई शारीरिक एवं मानसिक यातना दिनु वा बलजफती गर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘ऊ किन विद्यालय जान चाहँदैन वा उनलाई किन पढ्न मन लाग्दैन भन्ने कारण खोतलेपछि समस्याको हल निस्किहाल्छ ।’
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा घर भएका कक्षा–८ का विद्यार्थी नवीन नेपाललाई
पढ्नमा भन्दा मोबाइल र टीभीमा बढी रुचि हुन्थ्यो । बाआमाले जतिभन्दा उनको बेहोरामा सुधार आएन । ती सामग्रीको अत्यधिक प्रयोगले कसरी पढाइमा ध्यान नजाने गरेको र जाँच बिग्रने गरेको एक मनोपरामर्शदाताले बुझाएपछि नवीन छक्क परे । पढाइमा असर पर्ने चिजबिजबाट उनी अहिले
टाढा बस्छन् ।
सामाजिक अध्ययन पढाउने विराटनगरका शिक्षक महेश गौतमले आफ्नो विद्यालयमा मासिक २/४ वटा यस्तो समस्या आउने गरेको बताए । अभिभावकको सहयोग, निजी अनुसन्धान, जम्काभेट र विद्यार्थी लगायतबाट यस्तो सूचना आउने गरेको उनले बताए । ‘सहजीकरण र सम्झाइबुझाइबाट समाधान भएको छ,’ शिक्षक गौतमले भने, ‘एउटै विद्यार्थीमा यो समस्या कमै दोहोरिएको देखिएको छ ।’
बालबालिकाले विद्यालय जान नमान्ने, खाने वा पढ्ने बेलामा विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको छ भने सदैव हल्कामा लिन नहुने मनोचिकित्सकहरूले बताए । स्थानीय वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. रोशन पोखरेलले आफ्नोमा मासिक एक/दुई यस्ता बालबालिका उपचारका लागि आइपुग्ने गरेको बताए । परामर्शबाटै यस्ता मनोवैज्ञानिक समस्याको समाधान निस्कने गरेको उनले बताए ।
आवश्यकताअनुरूप अभिभावक, बालबालिका र शिक्षकलाई एक्लाएक्लै भेटेर एवं एकसाथ राखेर उपचार वा हल खोज्ने गरिएको डा. पोखरेलले बताए । ‘बाहयरूपले सामान्य देखिने कुराहरूले बाआमा र बालबालिकाको जीवनमा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘घरमा अशान्ति हुन्छ, कोही खुसी हुँदैनन् ।’ डा. पोखरेलका अनुसार सानैदेखि सामान्य खाना र सन्तुलित जीवनमा जोड दिनुपर्छ । ‘चाउचाउ, बिस्कुट वा भुजियाजस्तो फास्टफुड खाने बानी परेमा बालबालिकालाई दाल, भात र तरकारीजस्तो सामान्य खाना मन पर्दैन,’ उनले भने, ‘बलजफती खुवाउन खोजेमा बान्ता गर्छन्, यो स्वास्थ्यमा होइन, आनीबानीमा समस्या हो, त्यही भएर सुरुदेखि ध्यान दिनुपर्छ, जिब्रोमा स्वस्थ भोजनको स्वाद बसाल्नुपर्छ ।’ साना बालबालिकादेखि किशोरकिशोरीसम्मका फरक उमेर समूहका समस्याहरू व्यक्तिविशेषमा पनि फरक पर्ने भएकाले त्यसप्रति अभिभावक र शिक्षकले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी हुने विज्ञ सुझाउँछन् ।
प्रकाशित : मंसिर १५, २०७४ ०८:५९
ट्रेन्डी लुक्समा साम्राज्ञी
काठमाडौं — अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह केही दिनयता खबरमा छिन् । यो सब उनको पहिरनका कारण भइरहेको हो । ‘ए मेरो हजुर २’ फिल्मको प्रिमियरका लागि अस्ट्ेरलिया पुगेकी उनी कहिले रोयल ब्लु गाउनमा देखिन्छिन् त कहिले क्रप्ड टिज र वाइड डेनिममा ।
फेसबुकमा पोस्ट गरिएका उनका तस्बिरले राम्रो लाइक्स पाइरहेका छन् ।
रातो अफ–सोल्डर (मोडिफाइड) जम्परमा साम्राज्ञीलाई निकै आकर्षक देखिएको छ । वाइड डेनिम, फ्लावर प्रिन्टेड टप्स र सेतो स्निकर्समा पनि उनी खुलेकी छन् । वेल्स, ब्रिस्बेन, तास्मनियालगायत सहरको पृष्ठभूमिमा खिचाइएका तस्बिरमा उनको पहिरन निकै ट्रेन्डी लाग्छ ।
‘आई क्याचिङ ड्रेस बनाउन खोजेको थिएँ,’ साम्राज्ञीका ड्रेस डिजाइनर युवी थापाले भने, ‘भनेजस्तै भइरहेको छ ।’
अष्ट्रेलियाका चार सहरमा हुने प्रिमियरका लागि युवीले चार थरी लुक्स आउने पहिरन डिजाइन गर्नुपरेको थियो । कलर, कट्स र स्टाइलिङमा आफूले प्रशस्त मिहिनेत गरेको उनी बताउँछन् । ‘दुई साताभित्र अनेक कन्सेप्ट निकालेर पहिरन तयार पारेका हौं,’ उनले भने, ‘धेरै जटिल खालका लुगा छैनन् । क्यारी गर्न सजिलो होस् भन्ने थियो ।’ त्यसो त साम्राज्ञीमा पहिरन सम्हाल्ने ढंग भएकाले ढुक्कैले डिजाइन गर्न सकिने उनले बताए ।
‘दुई साताभित्र अनेक कन्सेप्ट निकालेर पहिरन तयार पारेका हौं ।’
साम्राज्ञी र युवीको सहकार्य दुई वर्षदेखि चलिरहेको छ । उनले कार्यक्रमको तालिका पठाएपछि युवी तयारीमा लाग्छन् । समारोहअनुसारका पहिरन चाहिए । त्यसमाथि अहिलेकी चर्चित अभिनेत्री परिन् । तर, यो कुराले आफूलाई खासै तनाव नदिने युवीको भनाइ छ । ‘उसलाई जे लगाए पनि सुहाउँछ’, उनले भने, ‘फेसन सेन्स पनि राम्रो भएकाले डिजाइनरका रूपमा ऊसँग काम गर्न सजिलो छ । बेबी पिंकमा बढी अट्रयाक्टिभ देखिन्छ ।’
आफ्नै नाम–थरको क्लोदिङ ब्रान्ड चलाइरहेका युवी अहिलेका व्यस्त डिजाइनरमध्ये एक हुन् । उनी सेलेब्रिटीहरूमाझ चर्चित छन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र स्वस्तिमा खडका पनि उनका नियमित ‘ग्राहक’ हुन् । ‘मैले ड्ेरस डिजाइन गर्दिन बाँकी हिरोइन कोही पनि छैन होला’, युवी हाँस्छन् ।